Maitiro ekuvandudza kushambadzira kwehukama mune yako eCommerce | ECommerce nhau
Maitiro ekuvandudza kushambadzira kwehukama mune yako eCommerce
Iwe unogona kunge usati wafunga iyi pfungwa pakutanga kuti uishandise mukutengesa kana kudhijitari. Hazvishamise sezvo kushamwaridzana kushambadzira iri zano idzva rakashandurwa nekufamba kwenguva. Kusvika padanho rekuti revo yaro yechokwadi haina kufanana makore mashanu apfuura sezvazviri ikozvino. Nekuti inotanga kubva pane yakasarudzika pfungwa uye zvinoenderana zvinhu zvekunze iyo yekambani pachayo digita.
Asi kuti utinzwisise zvishoma, zvichave zvakakodzera kuratidza kuti kushambadzira kwehukama ndiko zvinongedzo kana hukama hunogona kusimbiswa mukambani yepamhepo nevatengi vayo. Iyo inogona kuve unidirectional kana kutanga kubva kune vaviri vamiririri veichi chiitiko. Nekudaro, iri zano iro rinozivikanwa pamusoro pezvose nekuti pakupedzisira zvese zvinotenderera mutengi kana mushandisi. Nechinangwa chekuratidzira chekuvimbika pamwe nekuwanda kwekugona uye kushanduka.
Chimwe chinhu chinofanirwa kutariswa kana uchitaura nezve iri izwi risinganyatso kuzivikanwa mukushambadzira kwemazuva ano kune hukama nehukama hwayo hwakananga. Ukama kushambadzira ipfungwa yekutengesa yakachinja nekufamba kwenguva. Izvi zvave zvichikonzerwa nezvakawanda zvinhu, asi pakati peimwe yadzo kuendeswa kunomira. Sezvo makambani akange asina nzira yakapusa yekumisikidza iyo inonzi nzira-mbiri yekutaurirana neavo vanogona kutenga.
1 Zvehukama kushambadzira mune yako eCommerce: zvekuita?
2 Chinja rako bhizinesi meseji zvichienderana necustomer profile
3 Kukurukurirana kugadzirisa
4 Bhenefiti yehukama kushambadzira mumadhijitari mapurojekiti
5 Mimwe mipiro yehukama kushambadzira
Zvehukama kushambadzira mune yako eCommerce: zvekuita?
Rimwe remabasa ako makuru nderekuisa pekutanga traffic traffic pamusoro pemamwe marongero muzviito zvekushambadzira. Zvakanaka, mupfungwa iyi, chidzidzo chekutanga chaunofanira kudzidza kubva ikozvino chinotevera: yakawanda traffic inotambirwa kubva kune mbozhanhare kana zvigadzirwa zvehunyanzvi pane kubva kumatafura kana zvimwe zvakajairwa.
Mupfungwa iyi, zano rinotsigira kwazvo rekusimudzira e-commerce yako rakavakirwa pakuwana rutsigiro runogona kupa vashanyi ruzivo rwakaenzana rwavanowana pane desktop.
Tinogona kuita chidimbu ichi nenzira dzakasiyana. Kune rimwe divi isu tinogona chikamu nehuwandu hwevanhu, uye kune rimwe divi, nematanho ane chekuita nehunhu hwevashandisi. Kunyangwe kana zvichikwanisika, panogara paine sosi yekuisimbisa iyo zvichibva pane hunhu hwakavakirwa padyo nekutungamira unowana nemutengi wako akakwana Kuburikidza nhevedzano yemazano ayo anogona kubatsira zvikuru kubva zvino zvichienda mberi:
Chengetedza hukuru hukuru nevatengi kana vashandisi hapana mubvunzo kuti zvichaita kuti zvive nyore kwauri kuti udyidzane navo.
Tsanangura zvakajeka nzira yekutarisa. Ichi chikamu chakakosha cheruzivo icho chinogona kukubatsira iwe kuti uzive vari vako vatengi vako venguva dzose uye vasiri. Senge mamwe marudzi eruzivo kuti uzive tsika dzekutenga dzevanhu ava.
Kuongorora musika. Uine chinangwa chakanyatso tsanangurwa uye icho hachisi chimwe kunze kwekumisikidzwa zviri nani mukutarisana nemikana nemikana inosanganisirwa neese muchitoro chako chepamhepo nevatengi vako kana vashandisi.
Chinja rako bhizinesi meseji zvichienderana necustomer profile
Ehezve, imwe yematanho anobatsira iwe aunogona kutora kubva zvino zvichienda mberi chimwe chinhu chakareruka sekugona kuchinjisa nzira yekutaurirana yebhizinesi rako kune ese eanogona zvikamu zvevatengi.
Chii chauchazowana neiyi yemazuva ano hukama hwekutengesa system? Zvakanaka, kutanga kwezvose, kubva pane zvakaitika kune vako vatengi vatengi, nepo chechipiri, kusimudzira kwakanyanya kuchacherechedzwa muhukama hwemapato ese ari chikamu cheichi chiitiko.
Nenzira iyi, mhedzisiro yakatwasuka ichave iri yekudyidzana kwehukama nevatengi kana vashandisi. Kusvika padanho rekuti ichave nemhedzisiro yakanaka pane iyo kushambadzira kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa. Asi kubva kune imwe nzira yehungwaru inosiya zvese zviri mumaoko ekutengesa. Kana zvisiri, pane kudaro, ndizvo zvemukati zvemukati izvo zvinogona kukanganisa rudzi urwu rwezviito kuburikidza neInternet.
Icho chinhu chakakosha kuitira kuti ugone kuzadzisa zvinangwa zvako zvaunoda kubva ikozvino. Saka kuti pakupera kwezuva, shanduko dzinowedzerwawo kubva pakuitwa kwechirongwa ichi muhukama kushambadzira. Hazvishamisi kuti kutorwa kweiyi nzira yekushanda kunogona kuburitsa inopfuura pfungwa imwe iyo pakupedzisira inobatsira bhizinesi redu redhijitari. Senge mune zviitiko zvatinozofumura pazasi:
Kutsvaga iyo kudyidzana kwevashandisi nekambani, asi nenzira yechisikigo uye izvo hazvikurudzire maitiro akaomarara anogona kuomesa hukama nevatengi kana vashandisi.
Chikuru kubatana nevatengi vedu inogona kutipa iro rakakura vhoriyamu yeruzivo nezve zvaunofarira kana zvido.
El nhanho yekushandurwa kwemishandirapamwe edu ndidzo dzinogona kuwedzera hukama pakati pezvikamu zvese zvezviitiko.
Unogona kusvika padanho rekusiya iyo nyika yakabhadharwa kutenga zvigadzirwa zvedu, masevhisi kana zvinhu. Iyi ndiyo panguva ino zano rakanakisa rinogona kubva mukushambadzira kwehukama kwakakosha kwatiri kutaura nezvako muchinyorwa chino.
Bhenefiti yehukama kushambadzira mumadhijitari mapurojekiti
Ichokwadi kuti panogona kuve nemamwe matambudziko kana uchishandisa nzira yekushambadzira yakadaro. Asi kana pakupedzisira iwe ukasarudza kuumba yako yega yehukama kushambadzira chirongwa, iwe uchawana hwakawanda hwakawanda hwezvakanakira izvo zvichakubatsira iwe kuve neakabudirira ecommerce pakati pevatengi nevashandisi. Uye pakati pazvo zvinotevera zvinoratidzika kuti tichazokupa panguva ino.
Wedzera mukudyidzana nevangangoshandisa, asi pamwe ichi ndicho chinangwa chekutanga chekushandisa kushambadzira kwehukama mubhizinesi rako. Saka nenzira iyi, iwe unokwanisa kuwana rumwe ruzivo nezve ivo. Sezvo zvauchatanga kuziva bhizinesi rako redhijitari zvirinani uye ichi chimwe chinhu chinokubatsira zvakanyanya mune rako rehunyanzvi basa.
Tumira zvimwe zvakasarudzika zviitiko. Uku ndiko kukosha kwayo kuti inogona kuburitsa zvinokatyamadza zvakanyanya mukufarira hukama nevatengi vako nevashandisi. Iko painogona kushanda sechikonzero chekumutsa manzwiro muvatengi vako uye aya manzwiro anowanzo kuve nyore kurangarira. Sechikurudziro chekuwedzera nekusimudzira mhando iyi yehukama hwehukama nehukama.
Iwe unofanirwa kufunga kuti kuita kuti vatengi vako varangarire chiito chekushambadzira hakusi nyore. Asi kuburikidza nerudzi urwu rwechiitiko zvinokwanisika kuzviita. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingeita Ichave imwe yemakiyi ekukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa mune rako rehunyanzvi chiitiko kubva zvino zvichienda mberi.
Mimwe mipiro yehukama kushambadzira
Nekuve kwakawanda, hunhu hwapfuura hwakadhindwa neiyi modhi mukushambadzira kwemazuva ano handizvo chete. Kusvika pakuti pane vamwe vanogona kutokuunzira mamwe mabhenefiti kubva zvino zvichienda mberi: Unoda kuziva here kuti ndeapi mamwe akakosha? Zvakanaka, tichaenda kunonongedza iwe izvozvi.
Zviparadzanise kubva pamakwikwi
Iyo Internet nezvose zvakakomberedza izere nevakwikwidzi uye pachagara paine vamwe vadiki nepakati vezvemabhizimusi vari mune bhizinesi rakafanana neyako chaizvo. Mupfungwa iyi, iwe unenge usina imwe mhinduro kunze kwekuzvitsaura kubva kune vamwe kuti ugadzire kukosha uye zvinonzwisisika kuwana nekuchengetedza vatengi vako. Iwe unogona kuomesa chimiro ichi kubva kuhukama kushambadzira uye kubva kune anoshanda nzira dzekudzivirira yako yehunyanzvi zvido.
Kuvimba kukuru pakati pemapato maviri
Iwe unofanirwa kuziva kubva panguva dzino dzinogadzira kuvimba kubva kune vatengi vako kana vashandisi inogona kuita sarudzo kana zvasvika pakupona kana kubudirira kwebhizimusi rako repamhepo. Kusvika padanho rekuti ndicho chinonyanya kusarudza mukuita zano iri mukushambadzira kwemazuva ano. Kuti izvi zvive zvakadaro, zvichave zvakakosha kuti uve akatendeseka munzira dzebhizinesi rako kana chitoro chepamhepo. Usaregeredze ichi chikamu chinogona kukupa iwe vazhinji vanogona kupokana kubva zvino zvichienda mberi.
Pane chirevo chinowanzozadzikiswa muchikamu chedigital uye icho ndechekuti mutengi anogutsikana mutengi anodzokorora mumabasa ekutenga. Mupfungwa iyi, hukama hwehukama hunokudzidzisa iwe kukurudzira vamwe vashandisi kuti vashandise zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa. Kunyangwe mukushandisa kwekushambadzira kunoenderana nezvido zvako mukati me online bhizinesi chirongwa sezvo zvichikubatsira iwe kuzadzisa izvi zvinangwa nenzira ine musoro uye yakaenzana nzira.
Chengetedza vatengi kana vashandisi
Ukama kushambadzira ndeimwe yematsigiro ayo anokubatsira iwe kuchengetedza uye kuchengetedza vatengi uye nenzira iyi, kuve unokwanisa kuwedzera kutengesa zvakanyatsojeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Email marketing » Maitiro ekuvandudza kushambadzira kwehukama mune yako eCommerce